audio အတွက် စိတ်မပျက်နဲ့ . - keywords HERE
Home » driver » audio အတွက် စိတ်မပျက်နဲ့ .
အခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ virus ကြောင့် window တင်ပြီးခါကျမှ audio driver မရှိသူများအတွက် ရည်စူးပါတယ် အခုတင်ပေးတဲ့ program ကတော့ ဘယ် audio device ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုလို့ရပါတယ် . အသံမထွက်သူများ ထွက်ကိုထွက်လာရပါစေမည် . အာမခံပေးပါတယ် . ပြန်အမ်းတွေတော့ အစကတည်းက လက်မခံထားလို့ . ပိုက်ဆံတော့ ပြန်မအမ်းတော့ပါဘူး . လုပ်နည်း (၂) နည်းတင်ပေးလိုက်ပါ့မယ် ..